Na-agba ọsọ, Type2Phone na-ere ya obere oge | Esi m mac
A na-agba ọsọ, Type2Phone na-ere obere oge
Nke a bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ nwere ike ịba uru n'ọnọdụ ụfọdụ yana maka ọnụahịa dị ugbu a na mbelata ego a ị nwere ike zụta ya nwayọ. Anyị na-ekwu maka Type2Phone, ngwa nke anyị hụrụ na mbụ na m nọ na Mac ma ga - enyere anyị aka ide ihe na iPhone, iPad ma ọ bụ Apple TV (chọrọ tvOS 9.2 ma ọ bụ karịa) site na Bluetooth na nkasi obi nke anyị nkịtị kiiboodu. Ihe niile anyị chọrọ ide na ngwaọrụ iOS anyị nwere ike ịme ozugbo site na ngwa keyboard Mac na ngwa a.
Ọrụ ahụ dị mfe ma na-achọ ịnwe ya IPhone na Mac Bluetooth nyeere nhọrọ "Ọnọdụ A Na-ahụ Anya" ka ọ rụọ ọrụ, ma ọ bụghị ya enweghị ike ijikọ ndị a. N'ihe banyere Mac, ọ bụ ịbanye Ntọala Mmasị> Bluetooth na iPhone ọ na-arụ ọrụ site na Ntọala.
Naanị ihe yiri ka enwebeghị mma kemgbe mmalite ya, nke bụ afọ ole na ole gara aga, bụ na anyị kwesịrị ịmara njikọ mbụ na iPhone ka ọ bụrụ ụzọ abụọ, ndị ọzọ na-arụ ọrụ mgbe niile n'enweghị nsogbu. N'oge a, a na-ere ngwa ahụ mana ọ ga-ekwe omume na ọ ga-arị elu na nso nso ebe ọ bụ na ewepụrụ ya ụbọchị ole na ole, yabụ Jiri uru nke ahụ ugbu a ọ na-efu € 1,99. Ihe ndi a gha acho ka inwe OS X 10.6.6 ma obu meechaa tinye ya na Mac ma mee ka Bluetooth jikoo ya ma obu mmekorita ya, ya na ndi ekwenti akwadoro na iOS ha nile bu Spanish nke ISO.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » A na-agba ọsọ, Type2Phone na-ere obere oge
Zọpụta ohere na diski gị na Disk Cleanup Pro, n'efu maka obere oge
Ihe Ntụgharị vidiyo 2 GIF, n'efu maka obere oge